Ciidamada ammaanka Puntland oo qarax gaari ku fashiliyay gudaha gobolka Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ammaanka Puntland oo qarax gaari ku fashiliyay gudaha gobolka Mudug
Afar nin oo gaariga saarnaa ayaa sidoo kale ciidamadu xireen. [Xigashada Sawirka: Puntlandi]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka dowladda Puntland ee jooga gobolka Mudug ayaa qarax gaari ku fashiliyay gudaha degmada Beyra ee gobolka Mudug Jimcadii shalay, sida uu sheegay sargaal.
Sargaal katirsan ciidamada ammaanka Puntland ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in ciidamadu ay gacanta ku dhigeen gaari ay saarnaayeen waxyaabo culus oo qarxa iyo noocyo kale oo hub ah.
Sargaalka ayaa ka gaabsaday in uu magacaabo cida iska leh gaariga iyo halka uu ku jeeday.
Ku dhawaad afar nin oo gaariga saarnaa ayaa sidoo kale ciidamadu xireen, sida uu sheegay sargaalku.
Sanadadii dhawaa ee lasoo dhaafay, Puntland ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo gaari oo lagu dilay tobonaan shacab ah iyo masuuliyiin dowladda katirsanaa, waxaana masuuliyadooda sheegatay xagjiriinta Al-Shabaab.
January 24, 2017 Ciidamada ammaanka maamul goboleedka Jubbaland oo markab hub lagu soo qariyay ku qabtay dekada magaalada Kismaayo
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa la safatay xulufada uu Sucuudiga hoggaaminayo oo kasoo horjeeda Qatar, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay Puntland maanta oo Arbaco ah oo uu helay warsidaha Puntland Mirror. “Waxaan aqoonsanahay xaqiiqda [...]